2021 IWCA Musangano Wegore Negore (Gumiguru 20-23) - International Writing Centres Association
2021 IWCA Musangano Wegore Negore (Gumiguru 20-23)
2021 IWCA Yakabatana @ CCCC
Takabatana Zvakare Kuparadzanisa: Kufungidzira Nharaunda Dzedu Dzemaitiro
Nhengo dzeInternational Writing Center Association dzinouya dzichibva kune dzimwe nyika kumakondinendi nemakungwa, uye tinokoshesa kusiana uku seimwe yesimba resangano redu. Isu tinounzwa pamwe nezvatinogovana senharaunda yepasi rose yekuita, zvinotsanangurwa naEtienne naBeverly Wenger-Trayner (2015) senharaunda ine "chitupa chakatsanangurwa nedunhu rakagovaniswa rekufarira." Kwatiri, kuve nhengo zvinoreva zvese "kuzvipira kunzvimbo, uye… kugona kwakagovaniswa kunosiyanisa nhengo kubva kune vamwe vanhu" (E. & B. Wenger-Trayner, 2015). Panguva imwecheteyo, sesangano revamwe vanhu, isu tiriwo enharaunda zhinji dzemaitiro anowirirana, anopindirana, uye, dzimwe nguva, anoita kuti zvinhu zvinyongane patinenge tichikurukura hunhu nezvakaitika zveimwe nharaunda yekudzidzira tichitaurirana mune imwe (Wengner- Trayner, 2015). Asi, iko kusarudzika kwenzvimbo dzedu dzega dzinopa hupfumi hwezviitiko kubva kwazviri kudzidza nekukura. Kana paine chero chinhu, gore rapfuura rakasimudza kutarisa kwedu kwete chete kune izvo isu zvatinogovana sechikamu cheiyi nzvimbo yekunyora nharaunda yekudzidzira, asiwo maitiro edu nemaitiro edu zvinokanganiswa nehunhu hwedu mune dzimwe nharaunda dzekuita-mazhinji acho akavakirwa munharaunda munharaunda, mumaguta, uye munyika matinogara; masangano atinoshandira; uye yavo inoenderana magariro-nhoroondo mamiriro.
Ongororo yekutuka yezvino zvinyorwa uye musangano wemisangano kubva kumasangano edu ehama munongedzo kumatambudziko isu-varairidzi, vadzidzisi, vadzidzi, manejimendi - takataurirana gore rapfuura iri. Kana paine chero chinhu, denda iri, rakawedzera kuzivikanwa nezvekusarongeka uye kuramba kuchikosheswa uye kusadzikiswa kunowanikwa nemapoka munharaunda medu-uye nenzira dzakawanda mhirizhonga / kunyaradza kunoitika munzvimbo dzakasiyana. Pamusangano wegore rino chaiwo muna Gumiguru, tinoda kuziva matambudziko akatarisana nharaunda yedu yekunyora-denda riri kuitika pasi rose; kuenderera mberi kwekurwiswa kwedemokrasi muMyanmar, Hong Kong, neUS; kuwedzera kwemhosva dzekuvengana uye kusagadzikana kwemarudzi; kudzikisira kusingaperi kwepasi redu- uye woongorora mashandisiro atakaita matarenda edu ekupindura.
Pamusoro pegore rapfuura iri, takaona vanhu nemapoka munzvimbo dzedu dzakamiririra nhengo dzinomiririra nzvimbo kubva kuSouth neNorth America, Europe, Middle East, Africa, neAsia- vachipindura matambudziko aya nenzira dzakatsiga nedzetsika dzekutsigira zvose vanyori vanoshanyira nzvimbo dzedu uye zvose vanhu vanoshanda mavari. Nepo mazhinji ekuedza uku akavakirwa munzira dzekuziva uye kusungirirwa kunharaunda yedu yekunyora yenzvimbo yekuita, iwo zvakare anoratidzira maonero akasarudzika anotorwa kubva pakuwedzeredza kutendeseka kunharaunda dzenzvimbo dzemaitiro, chokwadi chinowedzera uye chinomesa basa redu nenzira dzisingafungidzirwe. Iri basa rinoda kuti isu tisimbisezve uye titangise patsva tsika dzedu, kuti tibate munzvimbo dzimwe nguva isina kugadzikana pakati pekutaura kuti isu tiri vanaani nekuita zvatiri, uye kuti tiongorore maitiro edu kuti tione kuti uye vanopindura sei kune edu azvino mamiriro.
Nepo vazhinji vedu takapedza gore rapfuura takaparadzaniswa nemhuri dzedu, vatinoshanda navo, nenharaunda, takabatanawo. Kugadziridza uye hunyanzvi zvakabata sekufunga kwedu dzimwe nzira dzekuve pamwechete. Isu takaona kuyedza kupindura ino kairotic nguva muzvinyorwa, musangano wemisangano, zvirevo zvemamiriro, tsvakiridzo, uye kudyidzana kuri kuita. Uye inyaya dzematambudziko edu nemhinduro, kutsvagisa kwedu uye zvirongwa - nguva dzatakasimuka takatarisana nekuora mwoyo kukuru - kwatinoda kupemberera pamusangano uyu. Sezvo isu tichiuya pamwe chete, kunyangwe tichiri takaparadzana panyama, isu tinotsvaga kubvuma, kuongorora, uye kupemberera kuti tinoramba tichizvifungidzira sevanhu vane hunyanzvi, hunyanzvi, hunoratidza, uye hunofungidzira nharaunda yekuita.
Zvirongwa zvinogona kukurudzirwa ne (asi hazvina kuganhurirwa kune) tambo dzinotevera:
Ndeapi matambudziko nzvimbo yako yakatarisana nawo gore rapera uye iwe wapindura sei? Kubva kunharaunda dzipi dzekudzidzira dzamakatora mukutsanangura nyaya nenzira dzekupindura?
Zviitiko zvegore rapfuura zvakakanganisa sei kuzivikanwa kwako semushandi wezvekunyora? Ivo vakanganisa sei kuzivikanwa kwenzvimbo yako?
Ko nzvimbo yako inotaurirana sei nezverunyararo / kusanganisa zvinonetsa? Mamiriro ezvinhu echinhu chegore rapfuura akanganisa sei basa iri? Iri basa rinonyanya kuvakirwa mune zviitiko zvemuno kana zvepasirese?
Ndezvipi zvekunze zvemunharaunda zvakaomesa matambudziko epasirese ako ekunyora nzvimbo basa? Ko zviwanikwa zvemuno zvakabatsirawo kupindura kumatambudziko aya, kana nharaunda yepasirese yekudzidzira yakakutsigira?
Kutama kwepamhepo kwakakanganisa nzira dzipi nharaunda nemagariro epasi rese ekuita uye nekutaurirana?
Ndeapi mavambo ekunyora epakati tsika uye / kana materu anoramba ari pamoyo weako maitiro? Wakavagadzirisa sei kuti vapindure zviri nani kune / mune ako mamiriro?
Ndezvipi zvinyatsoona, kana zviripo, zvine hukama hwemagariro hwakapihwa maererano nemazano ezve maitiro akanakisa, kudzidziswa kwevashandi, mikana yekutsvagisa, kana kubatana munzvimbo dzenzvimbo?
Iwe wakasimudzira sei kana kuchengetedza kubatana nevashandi vako, fakaroti, uye vadzidzi? Basa repamhepo rinogona kuita sei kuti kubatana uku kuve nyore kune vamwe vakasiyiwa?
Iwe wakafanirwa sei kugadzirisa maitiro ekuongorora kuti umiririre basa rako sezvawakafambisa online?
Ndeapi matsva ekutsvagisa trajectories akabuda kubva mukuchinja kwemamiriro ezvinhu emabasa edu gore rapfuura?
Sezvo isu tichifungidzira kudzokera ku "zvakajairika," ndedzipi tsika nyowani dzaunoda kuchengeta uye ndedzipi tsika dzaunoda kusiya kumashure?
Iyo 2021 IWCA Musangano ichaitirwa online mukati mevhiki yaGumiguru 18 uye icharatidza akasiyana mafomati mafomati. Vatori vechikamu vanogona kupa imwe yeanotevera marudzi emharidzo:
Mharidzo yePaneru: 3 kusvika ku4 mharidzo dzemaminetsi gumi nemashanu kusvika gumi nemaviri paneimwe tema kana mubvunzo.
Mhedzisiro Mharidzo: 15-20 mineti mharidzo (iyo ichasanganiswa kuita ipaneru nasachigaro wechirongwa).
Musangano: Chikamu chekutora chikamu chinotora vanopinda mukudzidzira kushingaira.
Yakatenderedzwa Kukurukurirana: maminetsi gumi neshanu ekutanga ekuronga nemutungamiri (s), inoteverwa nehurukuro inofambiswa pakati pevapinda.
Akasarudzika Mapoka Ekufarira: Ekurukurirano dzekutungamira dzakatungamirwa nevatinoshanda navo vane zvakafanana zvido, masisitimu masisitimu, kana kuzivikanwa.
Regedza Mharidzo: Iyo 5-maminetsi mharidzo inoumbwa nemifananidzo makumi maviri imwe inogara 20 masekondi
Mharidzo yePosita: Yekutsvagisa-yakasarudzika dhizaini maporesi (avo) vanogadzira posita yekumisikidza nhaurirano nevanopinda.
Mabasa-mu-Progress: Nhaurirano dzinotenderera uko varatidziri muchidimbu (maminitsi mashanu kusvika gumi) vanokurukura imwe yazvino (iri kuenderera) yekunyora nzvimbo dzekutsvagisa zvirongwa uye vozogamuchira mhinduro.
Ipo midhiya yePaneru neyeMumwe nemumwe zvichiri kuverengerwa, gore rino mhando dzakasiyana dzezvikamu dzichamirirwa zvakaenzana. Zvirongwa zvinofanirwa kuitwa naJune 4, 2021 na11: 59 pm HST (vanhu vazhinji vanozowana imwe nguva, kunze kwekunge uri muHawaii! :)
Enda kune iyo IWCA webhusaiti (www.writingcenters.org) yeruzivo rwemusangano uye kunhengo yenhengo (https://www.iwcamembers.org) kuti upinde mukati uye upe zano. Bata Dr. Georganne Nordstrom (georgann@hawaii.edu) kune chero rumwe ruzivo.
Wenger-Trayner, E. & B. (2015). Nhanganyaya kunharaunda dzekudzidzira: Pfupiso yekutarisa pfungwa uye mashandisiro ayo. Wenger-Trayner.com.
Kuti udhindise zvine hushamwari vhezheni, tinya pa 2021 CFP: Pamwe Chete Kuparadzaniswa.